Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Years!) - Myanmar Network
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Years!)
Posted by Myanmar Network on August 7, 2012 at 15:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Years! (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၈)။ နောက် သုံးနှစ်အတွင်း ငါချမ်းသာတော့မှာ!)
ေ"နာက်သုံးနှစ်အတွင်း ငါချမ်းသာတော့မှာ!" .... Johnny က သူသွားရမယ့် ခရီးကို မြင်ထားပါတယ်။
Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Years! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
ကဲ နင် အခန်းကိုမြင်ခဲ့လား?
အင်း။ အရမ်းကောင်းတယ်... နေရာအကျယ်ကြီးပဲ... အလင်းရောင်လည်းရတယ်၊ မြေအောက်ရထား ဘူတာရုံနားမှာ ရထားဘူတာရုံနားမှာ နေရာလည်းကောင်းတယ် – ပြီးတော့ သိပ်လည်းဈေးမကြီးဘူး။
ကြားရတာတော့ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ မြှုတ်ကွက် တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်…
အင်း Fadi ရဲ့  အစ်ကို ၀မ်းကွဲက ပိုင်ရှင်လေ...
အဲ့ဒါက ပြဿနာမရှိဘူး မဟုတ်လား?
ဟင့်..အင်း… မဟုတ်လောက်ပါဘူး… သူ့ကြည့်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ်…
ဟင့်အင်း... တကယ်ပါ... သူက အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါလည်း နေစရာ နေရာအသစ်လိုတယ်လေ!
အင်း။ သေချာတာပေါ့။ ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ… လာမယ့် စနေဆိုရင် ပြောင်းတော့မယ်!
Johnny: Hi! Magda and ....
မင်္ဂလာပါ - Magda နဲ့ .....
မင်္ဂလာပါ Johnny! လာထိုင်ပါဦး! အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?
ကောင်းပါတယ် ကျေးဇူးပါပဲ... Harry ကို စောင့်နေတာ။
နင်တို့နှစ်ယောက်က အခုတစ်လော အမြဲတမ်းတွဲနေသလိုပဲနော်...
ငါတို့က သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလေ၊ ပြီးတော့ သဘောထားလည်း တိုက်ဆိုင်တယ်...
အခု Harry က နင့်ဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား?
မဟုတ်ပါဘူး!!! သူက ငါနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတာ၊ ငါ့ဆီမှာလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး… ကွဲပြားချက်အကြီးကြီးပဲ!
ဒီလိုလေ၊ သူက ငါ့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ငါက သူ့ရဲ့ သူဌေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ် ဒါပေမယ့် သူက ငါနဲ့အလုပ်တူတူ လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးက ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအတွက် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်။ ဒါပဲ။
ငါကတော့ နင်နဲ့ Harry ရှိတဲ့ ရုံးခန်းမှာ အတူတူရှိနေချင်တယ်ဆိုတာကို သိပ်မသေချာဘူး။ နင်တို့ဘာလုပ်ကြလဲ အချိန်တိုင်း ဘောလုံးအကြောင်းပဲပြောနေကြတာလား?
မဟုတ်ပါဘူး! ငါတို့က ရုံးခန်းတောင်မတူပါဘူး!
တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ။ စရုံသက်သက်ပါ... ငါရိုင်းတဲ့သဘောနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းနဲ့ အလုပ်နဲ့ သတ်သတ်ခွဲထားတာ ကောင်းတဲ့ အကြံလို့ထင်လို့ပါ...
နင်တို့ပြောတာဟုတ်လောက်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ငါတို့က အဲ့လောက်ကြီးတူတူ အလုပ်လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ နင်တို့သိတဲ့အတိုင်း ကုမ္ပဏီက အကြီးကြီးပဲလေ။ ပြီးတော့ Harry က IT ဘက်မှာ အလုပ်လုပ်တာ။ ငါက operation ပိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တာလေ... အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေတာ၊ စာချုပ်တွေရအောင်ချုပ်တာ သဘောတူညီချက်တွေ ရအောင်လုပ်တာ...
အဲ့ဒါ နင်အမြဲပြောနေတာပဲလေ! ဘ၀မှာ ပိုက်ဆံထက်အရေးကြီးတာတွေ အများကြီးရှိတယ် နင်သိလား!
Magda စိတ်မပူပါနဲ့… တရုတ်လူမျိုးတွေအားလုံး က အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့က ပိုက်ဆံကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတာ မဟုတ်ပါဘူး!
ဟုတ်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါဆိုလိုချင်တာက အင်း၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ငါနားလည်တယ်ကွာ...
နင်ကံကောင်းတာပေါ့... ငါလည်း အဲ့လိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲ... ငါက ဘွဲ့ရတော့မယ် ပြီးတော့ အနာဂတ်အတွက် ဘာမှ အစီအစဉ်မချရသေးဘူး...
အို သူငယ်ချင်းရယ်… ဘာမှ မစီအစဉ် ရသေးတာလား?
အင်း၊ နောက်တစ်ပါတ်ဆိုရင်တော့ ဗိသုကာ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းသေးသေးလေးနဲ့ လူတွေ့စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်…
အဲ့ဒါ သတင်းကောင်းပဲပေါ့! နင်တော်တယ်!
အင်း... ဒါပေမယ့်... ငါက တကယ်စိတ်ပူနေတာ! ငါတစ်ခါမှ အလုပ်လူတွေ့စစ်ဆေးတာ မဖြေ ဖူးဘူးလေ ငါ့ကို အကြံလေးဘာလေး ပေးနိုင်မလား?
အာ... ငါကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်... ငါ လူတွေ့စစ်ဆေးပွဲ တစ်ခါ နှစ်ခါ လောက်တော့ ဖြေ ဖူးတယ်...
နင်သိသင့်တာတွေ ငါအကုန်ပြောမယ်! စိတ်မပူနဲ့။ ငါ့စကားကိုသာနားထောင်။ ငါ့ အကြံဥာဏ်ကို ယူလိုက်ပြီးရင် နင် အဲ့ဒီအလုပ်ကို ရမှာသေချာတယ်!
ဟိုကောင်တွေနဲ့ ချိန်းထားတာရှိတယ်လေ။ Fadi နဲ့ Harry – ဒီညနေ ငါတို့အားလုံးဘောလုံးကန်မလို့ တာ့တာ!
Permalink Reply by kyi lwin moe on August 9, 2012 at 11:40
Permalink Reply by ni ni tint on August 9, 2012 at 11:44
I am hoping this Series....
Permalink Reply by zaw phyo naing on August 9, 2012 at 12:00
Splendid. I enjoy these series. Thanks.
Permalink Reply by uhsanwinmaung on August 9, 2012 at 12:18
Billion thanks to send me such a
Permalink Reply by thanthansoe on August 9, 2012 at 15:39
Permalink Reply by Angry Angel on August 10, 2012 at 19:51
Thank samillion for lessons
I learn them as much as I can
Permalink Reply by 1144ur97wrch0 on August 12, 2012 at 20:37
Permalink Reply by Khaing Myint Myint Min on August 17, 2012 at 10:39
Thank you so much for this Lesson (Big City Small World) and I want to study next Episode.
Permalink Reply by 0ya2ezrblssig on August 23, 2012 at 17:36
that this so good.
Permalink Reply by Nanda Winnwe on August 26, 2012 at 11:45
I am looking forward next series and Episodes ..
Permalink Reply by Gyit on August 31, 2012 at 9:21
Permalink Reply by thanthansoe on September 1, 2012 at 8:11